Top 10 Free 3D ịme ngosi uwe Ngwa
All Solutions Play / Dezie / tọghata 3D Videos
Ị na-achọ mma free 3D video Player? Ma ọ bụ, chọrọ a ọkachamara ma mfe iji omume na-eme ka 3D fim? Ma ọ bụ ị dị nnọọ mkpa ụfọdụ Atụmatụ iji tọghata gị 3D fim? Ego a mpaghara, ị ga-ahụ niile ngwọta na-egwu ma dezie 3D videos.
1 3D Video weebụsaịtị
1.1 nrụọrụ ịgbazite 3D Videos
2 3D Video Onye kere
2.1 Free 3d Video eso
2.2 Free 3D ịme ngosi uwe Ngwa
3.1 3D Video Players maka PC
3.3 Play 3D Movies Na VLC
3.4 3D Video ese foto
4 3D Video Ntụgharị
4.1 3D Video Ntụgharị
4.2 Xilisoft 3D Video Ntụgharị Alternatives
5 2D ka 3D
5.1 2D Iji 3D MKV Ntụgharị
5.2 2D Iji 3D MP4 Ntụgharị
6.1 3D Movies Free Download N'ihi 3D TV
6.3 New 3D Movies Na 2014
6.4 YouTube 3D Videos N'ihi na Na
Atọ akụkụ (3D) kọmputa ndịna-emeputa na-ugbu a n'ọtụtụ ebe na, ka ọ bụrụ na fim, ngwaahịa aghụghọ, mgbasa ozi, wdg Ọ bụ ezie na ha na-ọtụtụ ndị na-hụrụ, nke ahụ apụtaghị na ha na-adị mfe kere. Iji nyere gị aka-esi n'ime 3D ịme ngosi uwe na 2014, anyị kere nke a ndepụta n'elu 10 free 3D ịme ngosi uwe ngwa.
Nke a free 3d ịme ngosi uwe omume e mepụtara site ọkọ n'ebumnobi nke ịbụ oghe isi. Ọ bụ oké vasatail na ike ga-eji maka ọtụtụ dị iche iche ọrụ ndị dị otú dị ka texturing, rigging, ndụ, na nsụgharị ahụ. Akwa price nke efu, nke a bụ oké omume na ị na-achọghị ka uche ya.
Mụta ihe banyere Blender >>
Google Sketchup bụ ihe ịtụnanya software maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ na ọ bụ otú mfe iji na ọbụna obere ụmụaka ike iji ya. Nke abuo, o nwere ikike n'ọtụtụ na elu na complexity si incredibly obere oru ngo n'ụzọ nile elu n'ime nnukwu physics anwale. All results nwekwara ike exported ka vidiyo, ihe oyiyi, na echiche.
Mụta ihe banyere Google Sketchup >>
AutoQ3D Community bụ oké omume na-enye ohere mfe edezi na zuru ojiji nke gị PC ndịna-emeputa kaadị. Ọ nwere ebube kensinammuo interface na a na-nyere n'efu ka ọha na eze n'okpuru a GNU ọha ikike, ọ na-isi na-eji maka prototyping 3D aghụghọ na-anwale ha feasibility.
Mụta ihe banyere AutoQ3D Community >>
3D Kanvas bụ otu ibé software na-enye ohere onye na-ese na-eji ezigbo oge 3D ịme ngosi uwe na ahu nagide a ikpuru-na-dobe usoro nlereanya na-ewu. Nke a bụ nnọọ mfe n'ụzọ iji mee ka ụdị karịa ndị ọzọ na ịme ngosi uwe na programmụ na nwere ike ikwe ka maka a ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji rụọ ihe ndekọ oge.
Mụta ihe banyere 3D Kanvas >>
DesignWorkshop Lite bụ ihe magburu onwe àgwà 3D nlereanya usoro ihe omume nchụso na na-adịkarị metụtara ụlọ na-ewu ụlọ oru ngo. Otú ọ dị, nke a omume nwere a sara ego nke mgbanwe na ike ga-eji nke fọrọ nke nta ihe niile na-arụ ọrụ na 3D. Ole na ole ndị ọzọ imewe omume bụ dị ka mma na n'ozuzu mgbanwe.
Mụta ihe banyere DesignWorkshop Lite >>
6. K3D sọfụ
K3D sọfụ bụ usoro ihe omume na visualizes na iche ná mgbakọ na mwepụ ụdị na otutu akụkụ n'ofè mfe atọ. Mgbagwoju anya parametric arụmarụ na iso-ebupụta na-ekwe na ike ga-agbakọrọ n'ime software. Onye a na-adịghị achọ ihe ọ bụla pụrụ iche nkà dị ka ọ na-tumadi dị nnọọ ịkwụnye data na ịhụ otú ọ na-adọrọ mmasị.
Mụta ihe banyere K3D sọfụ >>
Bishop3D bụ a ịme ngosi uwe omume na bụ ukwuu na-ewu ewu na-ahapụ ya ọrụ ike ukwuu ezi uche oyiyi na 3D ụdị na ala. Ebe nwere ike modeled na kenkwukorita n'ụzọ na-eji scripts ka eme ha. Udidi nchịkọta akụkọ bụkwa magburu onwe nakwa ruru ka nnukwu iche iche nke zuru ezu dị.
Mụta ihe banyere Bishop3D >>
FreeCad bụ a software mpempe na ihe ala-larịị arụmọrụ karịa ụfọdụ ndị ọzọ ndị ahụ e depụtara ebe a. Otú ọ dị, ọ bụ ihe dị mma maka ndị na-na-amalite nnọọ na kwa ndị chọrọ na-akpali ngagharị. Motions nwere ike e dere na oké ziri ezi na-eji ọkachamara iji chọpụta na nkà mmụta sayensị na-aza.
Mụta ihe banyere FreeCad >>
3DPlus-enye ohere ngụkọta beginners-esi banye 3D ịme ngosi uwe egwuregwu na-enweghị ọ bụla tupu ahụmahụ na nzuzo. Nke a bụ zuru okè maka obere ụmụ ma ọ bụ ndị na-bụ n'ezie beginners na nanị enweghị echiche ihe ha na-eme na ha oru ngo ma. Ọtụtụ ndị nwere ike irite uru site na nke a dị ka ihe instructional enyemaka dị ka mma.
Mụta ihe banyere 3DPlus >>
Anim8or bụ ihe magburu onwe mpempe software na specializes na ikwe ka peopel na-eji ya na-ewu ụdị na-eji rudimentary shapes dị ka cylinders. Ihe mgbagwoju anya shapes nwere ike karịrị oge Ozugbo shapes e guzobere. The ihe mgbagwoju anya a mmadụ chọrọ ha nlereanya na-ahụ, ukwuu ego nke shapes ga-abụ.
Mụta ihe banyere Anim8or >>
Best YouTube Video edezi Software & égwu
17 Best Free iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Ị
15 Best nhicha ngwa ọdịnala n'ihi Android
10 Best Free Video ngwa ọdịnala n'ihi Instagram
Samsung kwuru, sị: Apple Emebi Retrial Kwesịrị kwụsịtụ?
Olee otú Ịmata Ọdịiche dị iche iche ụdị nke iPhone na iPad
> Resource> égwu> Top 10 Free 3D ịme ngosi uwe Ngwa